कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन
वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पर्यटन विकासमा ९८ करोड रुपैया छुट्याइएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री बुढाले मन्त्रालयको कुल बजेटको ९८ करोड रुपैया पर्यटन विकासमा छुट्याइएको जानकारी दिए ।
उनले पर्यटनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने हेतुले कुल बजेटको ५२ प्रतिशत रकम यसमा विनियोजन गरेको जनाए । “कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाख १ गते ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ को विधिवत् उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गराइसकेको छ । त्यसले पर्यटक आउने क्रम बढेको छ” मन्त्री बुढाले भने ।
कर्णालीमा आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको सहज पहुँचका लागि पदमार्ग, आधारभूत संरचना निर्माण गर्न भनेर यसमा बढी बजेट छुट्याएको दावी गरिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणार्थ रारामा तीन करोड, डोल्पामा दुई करोड, हिमालय गे्रट टे«ेलका लागि दुई करोड, बुलबुले ताल निर्माणमा पाँच करोड र काक्रेविहारका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेशका १० वटै जिल्लाको भिडियो डकुमेन्ट्री सङ्कलन गरी प्रदेशको पर्यटन विकासको खाका तयार गरिने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन प्राधिकरणको विचार ल्याए पनि अन्त्यमा पर्यटन बोर्ड नै आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले कम लगानीमा बढी प्रतिफल र रोजगार दिएर सुनिश्चितताका साथ निरन्तर चलिरहने एक मात्र क्षेत्र पर्यटन उद्योग हो भने । उद्योग, वाणिज्य, होटल व्यवसायी, निजी क्षेत्र नागरिक समाज तथा पत्रकार सहित सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा खासगरी पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सक्ने खालको आवश्यक नीति, पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गर्न सकिए मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धि हुने सुझाव दिइएको थियो ।
चुँदी रम्घामा रामायणघर बन्दै
दमौली । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँको भानु नगरपालिका–४ शिखरकटेरीमा रामायणघर निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तीन करोड रुपैयाको लागतमा सो घर निर्माण हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको जन्मस्थल विकास समितिको सक्रियतामा निर्माण कार्य भइरहेको हो । हालसम्म ८० प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा भएको भानु जन्मस्थल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर रानाभाटले बताए । निर्देशक रानाभाटका अनुसार दुई ढलानको सो भवन साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने सभाहल, भवनको भित्तामा रामायणमा भएका श्लोक र रामायणसँग सम्बन्धित तस्वीर कुँद्ने योजना बनाइएको छ । रामायण भवनको निर्माण हुन थालेपछि साहित्यिक पर्यटकको ओइरो लाग्ने गरेको छ । १० रोपनी क्षेत्रफलभित्र रामायण भवन, भानुगृह, आवास गृह, चमेना गृह, पुस्तकालय, शौचालय, पोखरी लगायतका संरचना निर्माण गर्ने गुरुयोजना बनाइसकिएको समितिका अध्यक्ष श्रीभक्त आचार्यले बताए ।
उनले १९ करोड रुपैयाको गुरुयोजना तयार गरिएको जानकारी दिए । चुँदी रम्घाबेँसीदेखि शिखर कटेरीसम्म पुग्ने करिब तीन किलोमिटर कच्ची मोटरमार्ग निर्माण गरिए पनि वर्षाका कारण हिलाम्मे हुँदा पर्यटकलाई आवतजावत गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । सडक कालोपत्रका लागि सरकारसँग बजेट माग भइरहेको समितिका अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
बजेट विनियोजनमा भेदभाव गरियो ः अध्यक्ष ज्ञवाली
गैंडाकोट । गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष गोबद्र्धन ज्ञवाली (गणेश ज्ञवाली) ले नगरपालिकाले योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा क्षेत्र विशेष र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै विभेदपूर्ण तरिका अपनाएको बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष ज्ञवाली राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार रहेर विजयी हुनु भएको थियो । अहिले नगरपालिकाले नगरपरिषद्मा योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ । अध्यक्ष ज्ञवालीले २०७५ असार २२ गते यस सम्बन्धमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ–“गैंडाकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नगर परिषद् सम्पन्न भइसकेको छ । तर म एउटा यसै नगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यपालिकाको सदस्इको हैसियतमा नगर परिषद् अनुभूत गर्दा म अत्यन्तै दुःखीद भएको छु । नगरपालिकाले क्षेत्रविशेष र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक बहुमतको आधारमा विभेदपूर्ण तरिकाबाट योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरेको प्रति मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।
म एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाको इमान्दार कार्यकर्तालाई यस नगरमा वडा नं. १६ बाट बहुमतका साथ जनताहरुले आ–आफ्नो अभिमत प्रदान गरेर वडा अध्यक्षको हैसियतमा यस नगर कार्यपालिका समितिमा पठाएका हुन् । मैले असाध्यै राम्रोसँग बुझेको छु । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कसका लागि हो ? र के का निम्ति हो ? मैले बुझे अनुसार लोकतन्त्र जनहित र समाज तथा राष्ट्र निर्माणको निम्ति हो । विकासको र निर्माणको हिस्सामा यस नगरपालिकाको हरेक वडाका जनताहरु समान अधिकार राख्दछन् । मैले सुनेको थिएँ लोकतन्त्रमा जनतामाथि कुनै भेद तथा विभेद हुँदैन, तर विडम्बना छ, मलाई दुःख लागिरहेको छ । यस पटकको नगरपरिषद्का योजनाहरु हामी वडा अध्यक्षहरुको छलफलबाट छनौट भएनन् । विषयगत समितिहरुबाट मात्र किनारा लाउने काम गरियो । के हामी वडा अध्यक्षहरु योजना छनौट गर्ने अधिकार राख्दैनौं ? यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो कि होइन ? म सम्बन्धित निकायबाट यसको जवाफ माग्न चाहान्छु । मलाई लागिरहेको छ बहुमत र पहुँचको आधारमा विभेदकारी ढंगबाट वडाहरुमा योजनामाथि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
हरेक वडामा रहने जनताहरु कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीमा आस्था राख्नेहरु छन् । तर वडा अध्यक्ष कुन पार्टीको हो ? भन्ने पूर्वाग्रह राखेर बहुमत जुटाएर आज बजेट विनियोजन भएको छ । यसले ती जनताहरुलाई कत्तिको न्याय भएको छ ? यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिन जरुरी छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको चाँडै नै ध्यानाकर्षण होओस् । यदि सम्बन्धित निकायबाट जवाफ आउँदैन भने जनताको न्याय र अधिकारको निम्ति म संचार मिडिया मार्फत् आफ्ना विचारहरु राख्दै अगाडि बढ्न बाध्य हुने अवगत गराउँदै यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दछु ।”
रामपुर क्याम्पसको पढाइ सुरु
भरतपुर । विवादका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको त्रिभुवन विश्व विद्यालयले छ वर्षपछि रामपुर क्याम्पसमा पुनः पढाइ सञ्चालन गरेको छ । पश्चिम चितवनको रामपुरमा रहेको जग्गा र संरचना कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालय (ए.एफ.यू.) लाई दिने निर्णय सरकारले गरेसंँगै रामपुरमा त्रिविको पढाइ रोकिएको थियो ।
त्रिवि र ए.एफ.यू. बीचको विवादका कारण बन्द भएको रामपुर क्याम्पस २०७५ असार २४ गतेदेखि औपचारिक रुपमा पूर्वी चितवनको खैरहनी मावि परिसरमा सुरु गरिएको हो । त्रिविको कृषि क्याम्पसको सुरुवात गर्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थराज खनियाँले सबैको पहलबाट चितवनमा पुनः त्रिविले कृषि सङ्कायको पठनपाठन गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । सरकारले त्रिविलाई चैनपुरको भूतियास्थित कङ्काली सामुदायिक वनमा जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढेकाले जिल्लामा नै त्रिविको उत्कृष्ट कृषि क्याम्पस स्थापना हुने ताए । उनले रामपुरमा त्रिविले पाउने ४० बिघा जग्गामा नमूना इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोलिने बताए ।
त्रिविका कृषि सङ्कायका डिन प्रा.डा. केशव अधिकारीले छ वर्षपछि पुनः चितवनमा कृषि पढाइ गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । त्रिविले २०६९ सालदेखि रामपुर क्याम्पसमा भर्ना लिन नपाएको भन्दै उनले अब भने विद्यार्थीको कृषि पढ्ने चाहनामा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने बताए । २०२९ सालमा रामपुरमा त्रिविले कृषि क्याम्पस स्थापना गरेको थियो । एक वर्षे जे.टी.ए., दुई वर्षे आई.एस.सी. ए.जी. हँुदै विद्यावारिधिसम्मको पढाइ हुने गरेको थियो । सरकारले सो ठाउंँ ए.एफ.यू. लाई दिएसंँगै त्रिविका कार्यक्रम हटेका हुन् । सरकारले रामपुरमा रहेको तीन सय ९४ बिगाह जग्गामध्ये ४० बिघा त्रिविलाई इन्जिनियरिङ कार्यक्रम चलाउन दिने र बांँकी ए.एफ.यू. लाई दिने निर्णय गरेको छ । रामपुर छोडे बापत् त्रिविलाई कृषि सङ्काय पढाउन चैनपुरमा तीन सय ५४ बिगाह जग्गा दिन लागिएको हो ।
नौ वडा एउटै सचिवको भरमा
खलङ्गा । वडा सचिव नहुँदा जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका एक जना वडा सचिवले नौ वटा वडाको जिम्मेवारी एक वर्षदेखि सम्हाल्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत तत्कालीन गाविस सचिव सत्यदेव खनालले एक वर्षदेखि पुरै गाउँपालिकाका नौ वटै वडाको कामकाज गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । तर नौ वटा वडाको जिम्मेवारी एक्लैले कसरी सम्भव छ र ? उनले सदरमुकामस्थित गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालयमा बसेर नौ वटै वडाको जिम्मेवारी हेरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ मा वडा सचिवलाई पञ्जिकाधिकारी तोकेको छ । वडा सचिवको हस्ताक्षर बिना जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता र बसाइँसराइको काजगात बन्न सक्दैन । तर वडा सचिव खनाल सदरमुकाममै भए पनि गाउँपालिकाको पञ्चिकरणको काम भने रोकिएको छैन । वडा सचिव खनालले नागरिकता लगायतका सिफारिशमा सदरमुकामबाट अग्रिम (ब्ल्याङ्क) हस्ताक्षर गरेर गाउँ पठाइदिन्छन् । त्यसमा वडाध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाउने गरिएको छ । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणित, लक्षित वर्गको सिफारिश पनि त्यसरी नै खाली लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गरेर पठाउने र त्यहाँ रहेका तत्कालीन प्रशासन सहायक, सामाजिक परिचालक र लेखा सहायकले विवरण भरेर दिने गरिएको गाउँपालिका प्रमुख हरिचन्द्र बस्नेतले बताए ।
उनले बारम्बार माग गर्दा पनि सरकारले वडा सचिव नपठाउँदा समस्या भएको बताए । “गाउँमा बसे पनि कुन वडामा गएर काम गर भन्ने ? भौगोलिक विकटताले एक वडाबाट अर्को वडा पुग्न एक दिन पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन । साह्रै समस्या भएपछि यस्तो उपाय निकालेका हौँ” उनले भने । सेवाग्राहीलाई दुःख दिनुभन्दा केही समय यसरी चलाऔँ भनेर जनताको काममा बाधा नपुग्ने गरी सदरमुकामबाटै काम गरिरहेको उनले बताए ।
वडा सचिव मात्र होइन, कार्यकारी प्रमुख र गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पनि सदरमुकाममै बस्ने गरेका छन् । सदरमुकामबाट एक दिनको पैदल दूरीमा रहेको यो गाउँपालिकामा बैङ्क नहुँदा आर्थिक कारोबार समेत सदरमुकाममै हुने हुँदा सेवाग्राही सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् ।
न्यायिक समितिमा विवादका चाङ
दाङ । राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म २२ विवाद दर्ता भएका छन् । गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीले दर्ता भएका विवादमध्ये आठ विवाद मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएको, दुई विवाद भूमिसुधार कार्यालयमा समाधानका लागि सिफारिस गरिएको र तीन वटा इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा समाधानका लागि पठाइएको छ ।
अन्य विवाद छलफलका क्रममा छन् । समितिमा जग्गा विवाद, लेनदेन, घरझगडा, कुलो विवाद लगायत विवाद आउने गरेका छन् । समाधानका क्रममा विवादित पक्ष समयमा नआउँदा पनि समस्या हुने गरेको समितिका संयोजक चौधरीले बताए । उनका अनुसार समितिले १३ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने र ११ प्रकारका विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट गर्ने गरिएको छ ।
यसैबीच, गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको बैठकबाट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । विधयक स्वीकृत भएसँगै न्याय सम्पादनमा थप सजिलो भएको समितिले जनाएको छ ।
तुलसीपुर उपमनपाको बजेट पारित
दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट पारित भएको छ । उपप्रमुख माया आचार्यले गत असार १० गते तेस्रो नगर सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन पारित गरेसँगै बजेट पारित भएको हो ।
नगर सभाले आगामी आ.व. का लागि चालु खर्च अन्तर्गत तलब, भत्ता तथा कार्य सञ्चालनका लागि कुल बजेटको नौ दशमलब दुई प्रतिशतले आउने रकम १४ करोड ४९ लाख, १८ हजार विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत विकास, नगर र वडा स्तरीय पूर्वाधार विकास अन्य सःशर्त कार्यक्रमका लागि ९०.८ प्रतिशतले हुन आउने रकम एक अर्ब ४२ करोड ९२ लाख ७३ हजार विनियोजन गरेको बजेट पारित गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद डाँगीले जानकारी दिए ।
हुलाकी सडक निर्माणमा चरम लापरवाही
पप्पु कम्पनीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने जब्दीघाटको पुल चर्को विरोधका बीच १६ करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरेको एक वर्ष पनि टिकेन । जब्दीघाटको पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएको थियो । भत्किएको पुल केन्द्रीय तहले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर हुलाकी सडक अन्तर्गत ढोढरी र भुरीगाउँ सडक खण्डको निर्माणमा भने उनीहरुले चित्त बुझाएका छन् ।
चर्को गर्मी बढेसँगै अलपत्र अवस्थामा छाडिएको हुलाकी सडकको नेपाल–भारतको सीमा मुर्तिहादेखि राजापुरसम्मको यात्रा कष्टकर बनेको छ । उता, अनुपयुक्त डाइभर्सनको संरचनाका कारण हुलाकी सडकमा सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ । यतिबेला हुलाकी सडककै कारण सास्ती खेप्न बाध्य रहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरिरहेका छन् । सडक हिलाम्मे हुँदा आवतजावतमा असर पर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । हिलाम्मे सडकका कारण गुलरिया, मधुवन र राजापुरको व्यवसाय चौपट छ । बजार क्षेत्रमा हिलो हटाउन पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको सथानीयवासी बताउँछन् । हिलाम्मे सडक खण्डमा ठेकेदारलाई ढुङ्गा हाल्न लगाएर सडक सञ्चालन गर्नु परेको प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले बताए । निर्माण सामग्री सङ्कलनको काम भइरहेको र हुलाकी सडक निर्माणले तीव्रता नपाएको ठेकेदार कम्पनीका साइट इन्चार्ज सूर्य गुरुङले बताए ।
बस्नेतप्रति किसान संघको श्रद्धाञ्जली
काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान सङ्घले रोल्पा स्याउलीवाङका राम बहादुर बस्नेतको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । सङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव बी.बी. विष्टले २०७५ असार २१ मा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मृतक बस्नेतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयका सचिव विष्टद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ– “अखिल नेपाल किसान सङ्घको जिल्ला तहमा लामो समयदेखि आबद्ध रही हालै सम्पन्न केन्द्रीय भेलाबाट गठन भएको वस्तुगत सङ्गठनका न्युक्लसमध्ये तरकारी तथा बिउ उत्पादक सङ्घको न्युक्लस सदस्य रोल्पा जिल्ला रुम्तीगढी गाउँपालिका–८ स्याउलीवाङ निवासी वर्ष ४२ का राम बहादुर बस्नेतको २०७५ असार २० गते मृत्यु भएकाले सङ्गठनको तर्फबाट गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ । उहाँँ व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन र अन्य कृषि क्षेत्रका उत्पादनमा सक्रिय हुनु हुन्थ्यो । अखिल नेपाल किसान सङ्घ उहाँको निधनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवार जनमा समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।”
गढीमाई मन्दिरमा लक्ष्मी बैंकको सोलार
सिमरा । लक्ष्मी बैङ्क लि. तथा लक्ष्मी केयर्सको संयुक्त आयोजनामा बाराको महागढीमाई नगरपालिका बरियारपुरस्थित गढीमाई मन्दिरमा सोलार जडान गरिएको छ । बैङ्कले २० लाखको लागतमा १४ थान सोलार जडान गरी एक कार्यक्रमबीच शनिबार हस्तनान्तरण गरेको छ । गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिले मन्दिर परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैङ्कका डाइरेक्टर विश्वकर्ण जैनले हस्तान्तरण गरेका छन् । नगर प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादवले पर्यटकीय स्थलमा बैङ्कले जडान गरेको सोलारलाई नगरपालिकाले सुरक्षा दिने र त्यसको रेखदेख गरी बेलाबेलामा सोलार प्यानलको सरसफाइ गराउने बताए ।
त्यसैगरी, २०७५ असार २२ गते बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मी नरसिंह वादेको प्रमुख आतिथ्यतामा बनेपा नगर क्षेत्रभित्र वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बैङ्कको तर्फबाट दिपेश अमात्य, राजिव सापकोटा, भारती पाण्डे, बनेपा शाखाका कर्मचारी, बनेपा वातावरण संरक्षण अभियान समूहका सदस्य लगायतका सङ्घ÷संस्थाका प्रतिनिधीको उपस्थिति थियो । वृक्षारोपण कार्यक्रम बनेपा–९ स्थित गणेशस्थानबाट सुरु भई नेपाल खानेपानी संस्थान प्राङ्गणमा पुगी सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सय वटा विरुवा रोपिएको थियो ।
सम्बन्ध सुमधुर बनाउन गैँडा उपहार
भरतपुर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विभिन्न देशमा हालसम्म २६ गैँडा उपहारस्वरूप पठाइएको छ । विभिन्न देशमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि उपहारस्वरूप जनावर दिइएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेद प्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार अमेरिकामा छ र भारतमा चार तथा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, जापान, जर्मनी, बेलायत र अस्ट्रियामा दुई दुई गैँडा पठाइएको छ । निकुञ्ज तथ्याङ्क अनुसार पहिलो पटक १९८५ मा भारतको दुधुवामा चार गैँडा पठाइएको थियो । पछिल्लो पटक २००६ मा अस्ट्रियामा एक जोडी गैँडा पठाइएको थियो । १२ वर्षपछि पुनः अहिले दुई जोडी गैँडा चीन पठाउन लागिएको हो । यससँगै निकुञ्जबाट पठाइएका गैँडा ३० पुग्नेछन् ।
यस अघि, गैँडा पठाएर भारत, म्यान्मार र थाइल्यान्डबाट हात्ती ल्याइएको थियो । निकुञ्जका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादवले गैँडा दिएर भारतबाट मात्र १६ हात्ती ल्याइएको जानकारी दिए । यसबाट वंश विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । निकुञ्जबाटै विभिन्न देशलाई घडियाल र मगर गोही पनि उपहारस्वरूप दिइएको छ । चीनलाई गैँडा उपहार दिँदै गर्दा चीनबाट जेन्ट पान्डा ल्याउन सकेमा ठुलो उपलब्धि हुने समेत उनले बताए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक १३,४५०
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० निर्धारण गरेको छ । रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलबाट सम्पूर्ण रोजगार प्रदायक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । मन्त्रालयमा २०७५ असार २५ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री गोकर्ण राज विष्टले भने– “विगतका समयमा बढाइएको पारिश्रमिकको दरभन्दा यो बढी हो, यसलाई हामीले अहिलेसम्मकै उच्चतम वृद्धिदरका रूपमा लिन सक्छौँँ ।”
कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दिएमा सो कम्पनीलाई कडाइका साथ कारवाही गरिने मन्त्रालयका सचिव यज्ञेश्वर दाहालले बताए । उनले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुने जानकारी दिए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष भवानी राणाले पारिश्रमिक निर्धारणको कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनले हातमा हात राखी हिँड्नु आवश्यक रहेको बताए ।
धानको समर्थन मूल्य २,४३८ रूपैया
काठमाडौं । सरकारले आउँदो वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल खाद्य संस्थानका प्रतिनिधिबीच सोमबार भएको बैठकले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको मूल्य प्रति–क्विन्टल दुई हजार दुई सय ४७ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति–क्विन्टल दुई हजार चार सय ३८ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा प्रति–क्विन्टल धानको समर्थन मूल्य दुई हजार आठ सय रूपैयाँ छ । भारत सरकारले धानको मूल्यमा किसानलाई प्रति–क्विन्टल पाँच सय रूपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।
किसानबाट व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा पर्न थालेपछि उचित मूल्य उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बालश्रम विरुद्ध गुरुयोजना पारित
काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बालश्रम विरुद्धको गुरुयोजना पारित गरेको छ । गुरुयोजनाले अब कुनै पनि क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । गुरुयोजना अनुसार घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागूपदार्थ सङ्कलन तथा बेचबिखन, बुनाइ बालश्रम, इँटाभट्टाको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषण समेत), यातायातका क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टाभराइ, छिमेकी देशमा पलायन भएको बालश्रम, यान्त्रिक वा रसायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रम, माग्ने काम गरिरहेका बालश्रम, सडक व्यापारमा संलग्न बालश्रम, जडीबुटी सङ्कलन गर्ने बालश्रम, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम तथा होटल रेस्टुराँको बालश्रमलाई जघन्य अपराध मानिएको छ ।
गुरुयोजनाले बालश्रम निवारणसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र संथागत संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, बालश्रम निवारणसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम मार्फत्् सबल एवं अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, बालश्रममा परेकालाई बालबालिकाको नियमित अनुगमन, उद्धार, पुनःस्थापना र खोजी गरी प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रम मार्फत् समाजमा पुनःस्थापना गर्ने र बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिकाको परिवारका लागि रोकथाममूलक कार्यक्रम तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने रणनीति समेत ल्याएको छ । यसले सङ्घीय तह, स्थानीय तह, प्रदेश तह, नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संस्था, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, व्यावसायिक तथा निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनलाई जिम्मेवार निकायका रुपमा उभ्याएको छ ।
नेपालमा सम्पूर्ण प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य बताइएको छ । गुरुयोजनाले २०७९ सम्म निकृष्ट प्रकारको तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने उद्देश्य समेत राखेको छ ।
समताको जिल्ला भेला सम्पन्न
बुटवल । जातीय समता समाजको रुपन्देही जिल्ला भेला सम्पन्न भएको छ । समाजका संस्थापक संयोजक तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्व महासचिव सन्त बहादुर नेपालीको प्रमुख आतिथ्यतामा २०७५ जेष्ठ २६ गते बुटवलमा सो भेला सम्पन्न भएको हो ।
दिल प्रसाद नेपालीको अध्यक्षता र कृष्ण बराइलीको स्वागत मन्तव्यबाट अघि बढेको सो भेलाको सञ्चालन दिलिप रसाइलीले गर्नु भएको थियो । भेलालाई रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय सचिव दल बहादुर विक र अखिल (छैठौं) रुपन्देहीका सदस्य सरोजमान सिंहले समेत सम्बोधन गर्दै शुभकामना दिनु भएको थियो ।
भेलाले दिल प्रसाद नेपालीको अध्यक्षतामा जातीय समता समाज रुपन्देहीको जिल्ला सङ्गठन समिति गठन गरेको छ । गठित समितिको उपाध्यक्षमा दिलिप रसाइली, सचिव भोजराज विक, सहसचिव लक्ष्मी बस्याल र कोषाध्यक्ष कृष्ण बराइली रहनु भएको छ । समितिका सदस्यहरुमा यम बहादुर परियार, लढे बहादुर विक, रेणु सुनार र तारा विक रहनु भएको छ । सदस्यका दुई स्थान हाललाई रिक्त राखिएको छ । भेलाले डिलमाया परियार, गोविन्द विक र जित बहादुर विकलाई समितिको सल्लाहकारमा चयन गरेको छ । –प्रकाश जि.सी.
राजमोको सम्पर्क समिति गठन
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आई विभिन्न पेशा–व्यवसाय र अध्ययनमा संलग्न रहेकाहरुको भेला काठमाडौँको बागबजारमा सम्पन्न भएको छ ।
नेकपा (मसाल) का केन्द्रीय प्रवक्ता राम प्रकाश पुरी र कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीको समेत उपस्थितिमा २०७५ असार ९ गते सो भेला सम्पन्न भएको हो । भेलाले राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौं कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको गठन गरेको छ ।
गठित समितिको संयोजक जगत प्रसाद रेग्मी र सचिव समर बहादुर शाही रहनु भएको छ । नौ सदस्यीय सो समितिका सदस्यहरुमा हस्तराज रेग्मी, विष्णु वली भक्त बहादुर विक, दिपेन्द्र उपाध्याय, नविन शाही, गणेश रोकाया र सुशिल वली रहनु भएको छ ।
बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चा तिलोत्तमा–२ को नगर भेला २०७५ असार १६ गते सम्पन्न भएको छ । राजमो नगर उपाध्यक्ष हर्क बहादुर टन्डनको विशेश उपस्थितिमा सो भेला सम्पन्न भएको हो ।
भेलाले जुना भण्डारीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय वार्ड समिति चयन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा रेशम घिमिरे, सचिवमा गणेश पौडेल, कोषाध्यक्षमा कमला आचार्य, सदस्यमा रमेश भण्डारी, कल्पना टन्डन, तुलसी आचार्य, चन्द्रकला पौडेल, भुमा भण्डारी, पदम राज आचार्य र टङ्क आचार्य रहनु भएको छ । समितिको सल्लाहकारमा महेश जिसी, हर्कबहादुर टण्डन, दयानिधि पौडेल र श्यामलाल पोखरेल ररहनु भएको छ ।
रक्तिमको पनि वडा समिति गठन
सोही भेलामा यम बहादुर परियारको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको वडा समिति चयन गरिएको छ, जसको उपाध्यक्षमा दामोदर अस्लामी, सचिवमा लोक बहादुर परियार र कोषाध्यक्षमा सङ्गिता परियार तथा सदस्यहरुमा मनोज परियार, मिलन परियार, सुनिता परियार र कविता चौधरी रहनु भएको छ भने सदस्यको एक स्थान रिक्त रहेको छ।
त्यसको लगत्तै २०७५ असार २३ गते तिलोत्तमा–४ को वडा भेला सम्पन्न भएको छ । राजमो तिलोत्तमाका नगर सचिव उमाकान्त न्यौपाने र उपाध्यक्ष हर्क बहादुर टन्डनको विशेष उपःिथतमा भेला सम्पन्न भएको हो । भेलामा दुर्गानाथ खरेलले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो ।
भेलाले प्रेम आचार्यको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय वार्ड समिति चयन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा शकुन्तला गैरे, सचिवमा भिम बहादुर खड्का, कोषाध्यक्षमा नन्दलाल पान्डे र सहसचिवमा देवा गिरी रहनु भउको छ । सदस्यमा यम बहादुर परियार, भिम बहादुर नेपाली, जितेन्द्र विष्ट, देवी कुमाल, बिना अस्लामी र निर्मला चालिसे रहनु भएको छ । भेलाले सल्लाहकारमा कर्ण केसी, सुरेन्द्र नेपाली, गुञ्जमान घर्तीलाई चयन गरेको छ ।